Peji 9 - WWE RAW Mhedzisiro 12th Chikumi 2017, Yekupedzisira Muvhuro Husiku Vakundi vanokunda uye vhidhiyo inoratidzwa - Wwe
WWE RAW Mhedzisiro 12th Chikumi 2017, Dzazvino Muvhuro Husiku Vakunda vanokunda uye vhidhiyo inoratidzwa
Miz nebere vs Heath Slater naRhyno
Miz yechakavanzika tag timu mukwikwidzi yakazoita mukomana mune yebere koshitomu. Yakanga iri imwechete bere kubva svondo rapfuura? Ruzhinji rwakaimba isu tinoda bere sezvo Heath Slater akarova Miz nemaoko ekurudyi asati amaka Rhyno in. Bear saHeath Slater akarova Miz nemaoko ekurudyi akawanda asati amaka Rhyno mukati.
chii chinonyanya kufadza chokwadi nezvako?
Rhyno akaburutsa Miz nebandauko asati amaka Slater kuti adzokere mukati. Heath akarova axehandle kubva patambo yepamusoro bere risati razvipinza mukati. Slater akaenda kunobvisa mabheya asi bheya rakapindura ne 'kupenda' kuSlater. Bheya rakabva ravharira mubhegi hug paSlater asati amaka Miz mukati.
Miz akarirasa panguva ino uye akarwisa bere. Akanyatsofunga kuti bere ndiAmbrose sezvaaibvarura maski. Sezvakazoitika, bere rakanga risiri Ambrose. Rhyno akakungurutsira Miz mukati mhete mukati maro bere risati radzokera mukati.
Bere rakarova Heath Slater neMabasa Akasviba sezvazvakazoitika kuti Ambrose akange adzoka kunze sebere. Akarova Miz neMabasa Akasviba asati adhonzera Slater paMiz pini.
Heath Slater naRhyno vanotsanangura. Iyo Miz nebere
KUMASHURE MBERI 9/11ZVINOTEVERA
nzira yekuwanazve rukudzo muhukama
julia robertses ane vana vangani
Ko mrbeast akaiwanepi mari yake
zvikonzero nei uchida amai vako
alice musmondland tese tapenga pano quote